Maxaa looga hadlayaa shirka maamul goboleedyada ee Baydhaba? – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
STN News May 14, 2018 Leave a comment
Waxaa maanta magaalada Baydhaba ee xarunta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ka furmay shirka golaha iskaashiga ee dowlad goboleedyad Soomaaliya, kuwaasi oo halkaasi gaaray shalay, sheegayna inay ka arrinsanayaan arrimaha khuseeya maamuladooda.
Arrimaha amniga oo ay ka qeybgalayaasha maanka ku hayaan ayaa waxaa jiray shir dhawaan lagu qabtay Belgium-ka, halkaas oo uu ka qeybgalay Ra’isulwasaare Xassan Cali Kheyre, balse madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam oo dhawaan hadlay ayaa sheegay in dowlad goboleedyada aanan shirkaas lagu martiqaadin.
Madaxda ayaa waxaa kale oo ay intaa ku dareen in sidoo kale ay ka arrinsanayaan qeybsiga kheyraadka dalka iyo in ula-jeedada ugu weyn ee laga leeyahay shirkan ay tahay sidii wax iyaga ay isku waafaqsanyihiin ay ula hortagi lahaayeen dowladda federaalka,
Xiriirka qaar kamid ah maamul goboleedyada dalka iyo dowladda dhexe ayaa muddooyinkii dambe ahaa mid aan wanaagsaneyn, kadib markii ay isku khilaafeen go’aanka dowladda dhexe ay ka qaadatay khilaafka qaar kamid ah dalalka carabta.
Madaxweynaha maamulka Jubaland, Axmed Islaam, Axmed Madoobe oo dhawaan booqasho ku tegay dalka Imaraatka ayaa markii uu dib ogu laabtay magaalada Kismayo waxaaa uu sheegay in dowladda federaalka ay dhinac uga weecatay go’aankii dhexdhexaadnimada ee ay ka qaadatay khilaafka ka jira dalalka khaliijka.
← Dalka Burundi oo dad badan lagu laayay.
Dowladda China oo lacag dhan $ 1.5 Million oo dollar ugu deeqday dadka ay fatahaaddu ku dhufatay →